Sweden seeks to boost Zim investment - DailyNews Live
Gift Phiri • 15 February 2017 11:36AM • 0 comments
HARARE - Sweden’s new ambassador to Zimbabwe, Sofia Calltorp, has said she would immediately start working to restart stalled investment here and resume exports from the southern African country that plummeted after the controversial land grab programme.
The move underlines the growing belief in Brussels that Zimbabwe is pressing ahead with democratic reforms.
Sweden, Culture Fund in new partnership HARARE - The Culture Fund of Zimbabwe have signed a new agreement with the Swedish government that will see the latter contributing $1, 35 million (12 million Swedish kronor) ...
Mighty Warriors' global appeal HARARE - The Mighty Warriors are now attracting the best of the best in world women's football with the Swedish national side eager to play against Shadreck Mlauzi's team. ...
Swedish investors demand security, predictability HARARE - Swedish investors are seeking predictability and security before committing their capital in Zimbabwe, Sweden’s ambassador Lars Ronnås said. He said the investors ...
Mawungira eNharira back from Sweden tour HARARE - Mbira legend Wilfred Tichaona Mafrika, better known as Nyamasvisva, will perform for the first time this month at the Book Café on Friday. Nyamasvisva, backed by h...
$5m Swedish boost for women HARARE - The Swedish Government has contributed $5,3 million towards a joint programme that seeks to accelerate Zimbabwe’s gender equality and women’s empowerment. Sweden’s...